Bocquu filannoo bocquu keetiin bakka buusa. Bakka buusni kan bakka bocquu bakka buusu yeroo argii irratti mul'ate yookiin yeroo maxxansaa qofa dha. Bocquu murtaa'e tottolcha galmee kee keessaa hin jijjiiru.
Yoo barbaadde, bakka buusa durtii bocquu kan sirni dalagee kee fayyadamu yeroo bocquu hin jirre galmee keessaa mudatu faccisa.
Bakka buusni bocquu argama bocquuwwan wal quunnama fayyadama LibreOffice keessa jiran miidha.
Gabatee bakka buusaa raawwata
Qindaa'inoota bakka buusuu qindeessitu dandeessisa.
Gabatee bakka buusuu
Bocquu jalqabaa fi kan isa bakka buusu tarreessa. Hoggayyuu filadhuutii bocquu argii fi bocquu maxxansaa, yoo bocquun jalqabaa sirna kee keessatti yoo ijaaramellee bakka buusa. Bocquu argii qofa bakka buusuuf Argii qofa filadhu.
Yeroo mara haalojii
Haalojii qofa argii
Gocha bakka buusuu
Bocquu argii irratti bakka buusuu fi yeroo maxxansaa, akka bocquun ijaarame ykn akka hin ijaaramne.
Argii qofa irratti bocquu bakka buusuuf, akka bocquun ijaarame ykn akka hin ijaaramne.
Argii qofa irratti bocquu bakka buusuuf, garuu yoo bocquun hin jiru ta'e qofa.
Bocquu argii irratti bakka buusuu fi yeroo maxxansaa, garuu yoo bocquun hin jiru ta'e qofa.
Maqaa bocquu bakka buusuu barbaaddu filadhu yookiin galchi.
Maqaa bocquu ittiin bakka buusuu barbaaddu filadhu yookiin galchi.
Bakka bu'iinsa bocquu filatame raawwata.
Bakka bu'insa bocquu filatamee balleessa.
Qindaa'inoota bocquu HTML fi Maddawwan bu'uuraatiif
Bocquu fi hanga bocquu argama HTML fi madda lakaddaa bu'uuraatiif filadhu.
Bocquu fi hanga bocquu argama HTML fi madda lakaddaa bu'uuraatiif filadhu.. Bocquu mijaawaa ufmaan arguuf Automatic filadhu.
Bocquu gitaalaa qofa
Bocquuwwan gitaalaa qofa sanduuqa tarree Bocquuwwan mul'isuuf dhugoomsi.
Hanga bocquu argama HTML fi madda lakaddaa bu'uuraatiif filadhu.
Title is: Bocquuwwan